Seth Rollins dia nanambara tantara mahaliana ao ambadiky ny fijeriny 'fonon-tànana iray' - Wwe
Iray amin'ireo olon-dratsy malaza WWE amin'izao fotoana izao, vao haingana i Seth Rollins no niresaka MySanAntonio ary nisokatra tamin'ny lohahevitra marobe. Nanontaniana momba ny fijeriny fonon-tànana iray ity Tompondaka Manerantany teo aloha ity, ary nizara tantara somary mahaliana ho setrin'izany. Mety ho tsikaritr'ireo mpankafy fa i Rollins dia nanao fonon-tànana tokana tamin'ny tànany ankavanana tato ho ato.
Nilaza ilay Beastslayer fa notapahiny ny rantsan-tànany tokony ho 6 herinandro lasa izay, ary tsy maintsy nitafy fehiloha izy mba hahafahany mitolona. Nanampy izy fa manao fonon-tànana amin'ny tànana ankavanana mba hanarontsaronana ny vongan-dranomaso ary hisorohana ny fivezivezeny. Nilaza koa i Rollins fa tazominy vetivety ilay fijerena raha hahomby izy na tsia.
Lozam-pifamoivoizana nahafaly azy io. Holazaiko fa tapaka ny rantsan-tanako tokony ho enim-bolana lasa izay ary tsy maintsy manao pataloha aho rehefa mitolona, ​​ary noho izany dia mila manao fonon-tànana ambonin'ilay tampon-kitrotro mba hitazonana azy tsy hihetsika rehefa mitolona aho. Mazava ho azy fa afaka naka enina herinandro aho ary tsy nitolona mihitsy, saingy tsy izany no tena ataoko. Ka ny fanandramana dia ny fiezahana hametaka azy, saingy toa tsy nitazona azy tsara loatra ilay kasety. Noho izany, nasiako fonon-tànana ambonin'ilay izy mba hitazomako azy.
Ary, ary tiako, ary hafahafa ary noho izany dia iray amin'ireo zavatra lazain'ny olona hoe: ‘Fa maninona izy no manao fonon-tànana iray?’ Ny antony anontanianao ahy ity fanontaniana ity dia midika fa manao ny asany io. Mieritreritra aho fa hifikitra amin'izany isika ary hahita izay lasa fonon-tànana rehefa mandeha ny fotoana.
Vakio ihany koa: Seth Rollins dia nanambara ny fotoana nahatsapany fa kintana i Buddy Murphy
Rollins dia milalao ny asan'ny olon-dratsy amin'ny alin'ny alatsinainy alina RAW, ary nanangana ny antoko misy azy miaraka amin'ireo mpanoratra ny Pain sy Buddy Murphy. Samy handray anjara amin'ny lalao Royal Rumble i Rollins sy i Murphy amin'ny 27 Janoary, ary azo antoka fa hanao tranga mahaliana izany.
Rollins, izao ombelahin-tongony tsy misy dikany izao, dia hanao izay farany azony atao mba hahazoana ny maimaimpoana maimaimpoana isan-taona amin'ny fanindroany, na inona na inona ilaina. Ny mpankafy dia afaka manantena an'i Murphy sy i Rollins hanandrana hiara-hiasa sy hanafoana ny rafitra Superstars tsirairay avy, ary ny fihazakazahan'ny AOP dia tsy azo fehezina ihany koa.
Ahoana ny eritreritrao momba ny fonon-tànana iray an'ny Rollins? Te hahita azy hitandrina azy ve ianao?
ahoana no ahalalanao fa tapitra ny fiarahanareo
ny fomba hahatonga anao ho hendry kokoa
ahoana no hilazana raha misy fihenjanana eo amin'ny lahy sy ny vavy
ahoana ny fomba hifanatrehana amin'ny olona nandainga taminao
tsy fahampian'ny fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ny fifandraisana
manandrana maka andro iray isaky ny mandeha aho